Rakaabka Hadalka oo Rakaab ah ayaa laga eryay metrobus | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulInay ka hadlaan gawaarida dheeraadka ah ee la gooyey
Inay ka hadlaan gawaarida dheeraadka ah ee la gooyey
23 / 01 / 2013 34 Istanbul, tareenka, GUUD, Headline, Metrobus, TURKEY
Da'yarka 25 wuxuu si aan toos ahayn ugala hadlay taleefanka gacmeedkiisa illaa magaalada metrobus fiidkii. Waardiyaha amniga ee 5 ma uusan istaagi karin rakaabkii tuurida tuurista tuubbooyinka
Waxay ahayd Arbacadii lasoo dhaafay. Fiidnimadii, waxaan u aaday Zincirlikuyu asxaabteyda 5 oo ka socda shirkadda aan ka shaqeynayay sarkaalka amniga. Ka dib markaan sugnay dhowr BRTs, waxaan gaarnay in aanan safri karin anagoo fadhinayna dhammaanteen waxaan tagnay BRT si aan u istaagno. Markii Metrobus ay timid Mecidiyeköy stop, way buuxsantay. Sidaas ayuu ku sii waday safarkiisa isagoo leh sharafta dadka. Meesha joogsiga Çağlayan, dadbadan ayaa kordhay. Neefku waa ku dhow yahay. Markii aan soo gaarnay joogsiga Dahabiga ee Dahabiga, wiil da 'yar ah oo da'diisu tahay 25 oo ag taagan aniga ayaa wicay taleefanka.
DHAMMAAN DHAMMAAN WAA KARA
Ninkii dhalinyarada ahaa ee taleefanka ka jawaabaya ayaa yidhi, ooh, maxaa jira, saaxiib? Maxaa soo kordhay, maxaa soo kordhay? Qofna ma dhahayo wax ku saabsan qof dhalinyaro ah oo la hadlaya saaxiib. Si kastaba ha noqotee, xaaladdu way is beddeshay markii wada-hadalka uu buuq iyo sawaxan lahaa, xitaa haddii ay tahay dariiqa ama guriga. Dhowr rakaab ah ayaa ka gunuunacay, laakiin ninka dhallinta yar ee taleefanka kula hadlaya cod dheer iyo qosol ayaa waliba ina dhibaysa. Isagu dan kama gelin haddii aan wejigiisa eegno. CevizliWaxaannu u tagnay beertii canabka ahayd. Ninkii dhalinyarada ahaa qayladiisii ​​waa sii waday. Rakaabkiinnii waxay dhaheen, im Walaal, ilaa goormaad sheekaysaneysay? Ama hadalkaga uga tag waqti dambe ama ka tag, ka dibna gal. Waad na dhibtay fiidkii iyo fiidkii,, Ninkii dhallinyarada ahaa ayaa kor u taagay gacantiisa, "Maxaad tahay?"
Waxaan ha hor istaagina laga yaabaa ...
Dhab ahaantii santuuqa ugu hooseysa sanka ayaan aad u dhageysanayey oo waan argagaxay. Waan is eegnay annaga oo aan waxba is dhihin. Waxaan go’aansanay waxa lagu sameeyo dhoola cadeyn kooban. CevizliAlbaabo dheeri ah oo ku yaal beerta canabka ah ka hor inta aan la xirin, shan ka mid ah oo naga wada hadalnay taleefanka oo laga soo dejiyay dhisme ku qasbay bannaanka. Xitaa ma uusan ogeyn waxa ay aheyd. Albaabada Metrobus waa la xirmay waxaana si xasilooni iyo xasilooni ah u socdey Merter. Rakaabka, ninka dhallinta yar ayaa si xushmad la’aan ah taleefoonka ugula hadlaya, isagoo aan dhahneyn wax aan uga mahadcelino, waxaana loo sheegay inuu tuuro. Tani waxay ahayd daqiiqad xusuus mudan oo nooga fadhida magaalada.
Istanbul waxay timaaddaa Metrobus
Samsunda Metrobüs Iskuday Nidaamka Tareenka Tekkeköye
Ma aysan dhegeysan Kanalioğlu oo ka hadlay xarunta Trabzon ee xaruntu
Kazmaz ma uusan fahmin Koray Aydin oo u hadlay xarunta xaruntii saadka ee Trabzon
Saldhigga Izmit Köseköy-Gebze Khadka Tareenka Xawaaraha Sare wuxuu la dhigey xaadiritaanka wasiirka 3
Saldhigga xawaaraha sare ee tareenka ee isku xiraya Bursa ilaa caasimadda ayaa la dhigay munaasabad
Shabakada Basaska Tareenka ee Baasuukha Baasuukha oo la bilaabay xiiso (Video)
Saxiixyada Tiknoolajiyada Tiknoolajiyada Sare ee Yurub
Joogitaanka Zincirlikuyu metrobus
70 kilomitir Izmir ee Odemis oo cusbooneysiiyey xarun tareen oo 90 ah
RayHaber 23.01.2013 Warbixinta Shirka